Sida loogu noqdo macruufka 13 kadib rakibidda macruufka 13.1 beta | Wararka IPhone
Sidee loogu noqdaa macruufka 13 kadib rakibidda macruufka 13.1 beta
Ignacio Sala | | macruufka 13, Casharrada iyo buugaagta
Toddobaadkii hore, ragga ka socda Cupertino ayaa bilaabay beta ugu horreeya ee macruufka 13.1, dhaqdhaqaaq ilaa iyo hadda aan la samayn sanadihii hore taasna waxay ka dhigan tahay nooca ugu dambeeya ee iOS 13 ficil ahaan waa diyaar in la bilaabo daqiiqado ka dib dhammaadka dhacdada soo bandhigidda ee IPhone-ka cusub ee 2019.
Dhacdadan waxaa la qaban doonaa 10ka Sebtember. Haddii aad cusbooneysiin otomaatig ah shaqeyneyso, boosteejadaada ayaa loo cusbooneysiin doonaa beta-ka cusub ee iOS 13.1, markaa marka nooca ugu dambeeya ee iOS 13 la sii daayo, ma yeelan doontid suurtogalnimada inaad ku soo dejiso noocaas. Haddii aad rabto hoos u dhig oo dib ugu noqo macruufka 13 Waxaan ku tusineynaa tillaabooyinka la raacayo.
1 Sidee hoos loogu dhigayaa iOS 13 laga bilaabo iOS 13.1
2 Sida looga baxo barnaamijka beta ee iOS 13
3 Miyuu macruufka 'iOS 13 beta' ku habboon yahay in lagu dhego?
4 Si aad u tixgeliso
Sidee hoos loogu dhigayaa iOS 13 laga bilaabo iOS 13.1
Marka hore, waa inaad laba jeer ka fikirtaa markaad hawshan fulinayso, maaddaama geeddi-socod kasta oo hoos-u-dhigis ah, dib ugu noqoshada qaybtii hore, ay taasi u baahan tahay ka saar dhammaan waxyaabaha ku jira qalabkeena. Sidoo kale, markaan dib ugu laabaneyno nuqul hore, haddii aan hayno nooc ka sarreeya, dib uma soo celin karno qalabkayaga.
Haddii aad cadahay inaad rabto inaad hawshan fuliso, waa kuwan talaabooyinka la raacayo. Midka ugu horreeya waa in aad nuqul ka sameysid dhammaan waxyaabaha aad rabto inaad keydiso. Haddii aad dhaqaajisay kaydinta ku jirta iCloud Way ka badan tahay intaas.
Marka hore, waa inaan hubinaa inaan rakibnay nooca ugu dambeeyay ee iTunes ee kombuyuutarkayaga.
Marka xigta, waa inaan ku xir iPhone-ka, ama iPad, kooxdeena adoo adeegsanaya fiilo.
Marka xigta waa inaanu kicinaa habka soo kabashada ee ku jira iPhone-keena:
Wixii iPhone ama iPad leh Aqoonsi Face ah: Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka Volume Up. Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka Volume Down. Riix oo hay batoonka kore ilaa aaladda ay dib uga bilaabato. Riix oo hayso badhanka kore ilaa aaladda ka gasho habka soo kabashada
iPhone 8 / 8 Plus: Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka Volume Up. Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka Volume Down. Kadib riix oo hayso badhanka dhinaca illaa shaashadda qaabka soo kabashada ay muuqato.
iPhone 7/7 Plus / iPod taabashada (jiilka 7aad): Riix oo hayso badhanka Hurdada iyo Volume Down isla waqtigaas. Ha sii daynin badhannada markaad aragto astaanta Apple. Riix oo hay labada badhan ilaa aad ka aragto shaashadda qaabka soo kabashada.
iPhone 6s, iPad leh badhanka jirka iyo noocyadii hore: Riix oo hayso badhanka hurdada iyo badhanka guriga. Waa in aynaan joojinin riixista labada badhan illaa ay ka muuqato shaashadda qalabka qaab soo-kabasho ah.
Waqtigaas, iTunes waxay ogaan doontaa in qalabkeenu cillad ku jiro isagoo nagu booriyay inaan soo celino qalabkeena. Dib u soo celinta qalabkeenu wuxuu u maleynayaa inuu tirtirayo dhammaan waxyaabaha ku jira, waxyaabaha aan awood u yeelan doonno inaan soo celino oo keliya haddii aan sameynay nuqul nuqul ah oo isla nooca iOS ah ee aan rakibi doonno.
Gujinaya Soo Celinta, iTunes si toos ah ayuu u soo dejisan doonaa nooca ugu dambeeyay ee iOS oo hadda laga heli karo server-yada Apple, macruufka 12.4.1 waxayna ku sii socon doontaa rakibideeda.
Haddii aan marno geeddi-socodka marin-u-helka betas-ka dadweynaha mar kale, waxaan ogaan doonnaa in Apple ay na siiso beta-kii labaad ee iOS 13.1, sidaa darteed waxaan mar kale la kulmi doonnaa dhibaato la mid ah. Tani waxay nagu qasbeysaa inaan raadino internetka qaar ka mid ah IPSW-yada kala duwan ee noocyada kala duwan ee iOS 13 betas. IPSW ee noocyada kala duwan ee iOS 13 betas in Apple sii daayay. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa lambar 8, kahor sii deynta macruufka 13.1 beta 1.
Sida looga baxo barnaamijka beta ee iOS 13
Ka tag barnaamijka beta si qalabkeena raac wareegga cusbooneysiinta Apple Waa geedi socod aad u fudud oo noo oggolaan doonta inaan had iyo jeer ku raaxaysanno nooc deggan oo ah macruufka. Betas waa betas, noocyo tijaabo ah ka hor inta aan la sii deyn nooca ugu dambeeya, sidaa darteed waxqabadkooda, mararka qaarkood, maahan midka ugu qanacsan, sidaa darteed marnaba laguma talin karo in lagu rakibo qalabka aan u adeegsan doonno shaqadeena, Maalintii maalin…
Marka hore waxaan kor u qaadaynaa Dejinta> Guud.
Marka xigta, dhagsii Aqoonsi. Qeybtaan gudaheeda, dhammaan astaamaha aan ku rakibnay qalabkeenna waa lasoo bandhigi doonaa.
Waxaan doorannaa macruufka 13 oo guji Tirtir astaanta
Si loo hubiyo inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee terminaalka, annaga iOS codsan doonaa lambarka iPhone-ka.
Marka xigta, waxaad na waydiisanaysaa Aynu xaqiijinno inaan dooneyno inaan tirtirno astaanta.
Markaan gujino Delete, waxaan arki doonnaa in astaanta iOS betas ay ka dhammaatay terminaalkeena oo kaliya midka aan rakibnay ayaa la muujiyaa hadday xaaladdu tahay.
Haddii aanan haysan wax muuqaal ah oo kale oo lagu rakibay aaladdayada, ikhtiyaarka astaanta ee Settings> General ma muuqan doono.
Miyuu macruufka 'iOS 13 beta' ku habboon yahay in lagu dhego?
Halkan wax waliba waxay kuxiranyihiin rabitaanka aad u qabto tijaabi warka ay Apple ku soo bandhigeyso cusbooneysiinta macruufka ee isku xigxiga. Ugu horreyntii, inta badan wararka lagu soo bandhigay WWDC-dii ugu dambeysay waxay la imaan doonaan nooca ugu dambeeya ee iOS 13, si ka duwan sanadihii hore halkaasoo qaar ka mid ah shaqooyinka lagu soo bandhigay WWDC u dhiganta, aysan imaan illaa ku dhowaad sannad kadib.
Haddii aad rabto in boosteejadaadu si sax ah u shaqeyso, adigoon soo bandhigin dhibaatooyinka batteriga, cilladaha dalabka, dib u bilaabid lama filaan ah ama dhibaato kale oo la xiriirta isticmaalka betas, waa inaadan isticmaalin barnaamijkan. Taasi waa haddii, labadii sano ee la soo dhaafay, macruufka betas ay bixinayaan xasilooni nidaam ah oo aan waligeen horay u malayn karin. Xasiloonidaani waxay ahayd mid ka mid ah sababaha Apple u go'aansaday inuu u furo barnaamijka beta beta-ka ugu dambeeya.
Barnaamijka beta ee dadweynaha wuxuu u oggolaanayaa shirkadda Cupertino dhakhso u hagaaji dhibaatooyinka noocyada IOS ee aad suuqa ka bilaabi karto. Sidan oo kale, wajiga beta ee cusbooneysiinta soo socota marwalba wuxuu leeyahay waqti ka gaaban waqtiga sanadihii hore.
Si loo rakibo betasyada kala duwan ee Apple u soo bandhigtay noocyada soo socda ee iOS, waxaa lagama maarmaan ah in la haysto shahaadada Apple ee u dhiganta oo la rakibo, midkoodna loo dhiibo kuwa horumariya ama kuwa ka tirsan barnaamijka beta beta. Ilaa iyo inta aan hayno mid ka mid ah shahaadooyinka la rakibey, Waxaan heli doonaa macruufka kala duwan ee betas ee Apple daabacdo.
Haddii aan rabno inaan joojino helitaanka betas, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa ka saar shahaadadaas qalabkeena. Iyadoo laga saarayo shahaadadaas, qalabkeenu wuxuu ku laaban doonaa wareegga caadiga ah ee cusbooneysiinta, taasi waa, maadaama Apple ay sii deynayso noocyada ugu dambeeya. Haddii waqtiga tirtirka shahaadada nooca ugu dambeeya la sii daayo oo aadan helin ogeysiiska u dhigma, waa sababta oo ah waxaad horeyba u haysatay isla noocii hadda la sii daayay oo la rakibay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Sidee loogu noqdaa macruufka 13 kadib rakibidda macruufka 13.1 beta
Twitter-ku wuxuu si ku-meel-gaar ah u joojiyaa awoodda lagu soo dhejin karo tweets-ka SMS